တာယာအပြီးသတ်အဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးတင်ဒါရလဒ် - RayHaber
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုlevel Crossing တုရုမြို့ရုပ်ဖျက်လေလံရလဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရ coated
တန်းယာနောက်ကျလေလံရလဒ်များကို tebdil ဝတ်ခံရဖို့
အဆိုပါ 31 390 + ကီလိုမီတာ Tekirdag Muratlı LINE (MURATLI Müselles) တွင် coated တွေ့သည်အဆင့် Crossing ရော်ဘာ (ရော်ဘာ) စီးပွားရေးလေလံရလဒ်ရုပ်ဖျက်ကဲ့သို့ဖြစ်ရ
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး 1 ။ ဒေသတွင်းပစ္စည်းများညွှန်ကြားမှု tebdil နူးညံ့ 2019 ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကိုအလုပ်မဟုတ်သကဲ့သို့ 434181 (MURATLI Müselles) Found အဆင့် Crossing ရော်ဘာ (ရော်ဘာ) ခုနှစ်တွင် TL Tekirdag Muratlıလိုင်းကီလိုမီတာ 105.751,72 + coated ခဲ့သော (TCDD) 150.927,70 / 31 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 390 TL နှင့် 8 အကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ် သူ LIMITED ရရှိခဲ့သည့် LSE လေလံ£ 107.517,68 ရထားပို့ဆောင်ရေးတည်ဆောက်နေ Trading Company အညီတင်ဒါ၏နောက်ဆုံးရလာဒ်များပေးထားပေးထားနှင့်မထားပါဘူး။ နုလေလံပါဝင်2ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့ + 31 390 ကီလိုမီတာ (MURATLI Müselles) Found အဆင့် Crossing ရော်ဘာ (ရော်ဘာ) မှာ Tekirdag Muratlı Hotline အဆိုပါ tebdil စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် coated ခြင်းကိုဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ်ကနေကြာချိန် 45 (လေးဆယ်ငါး) ပြက္ခဒိန်ရက်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆငျ့ Cross and အဆင့်ကိုကူးဂီယာလိုင်းများအောင်ထိန်းချုပ်အလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည်ရေးဆွဲခဲ့သည် 06 / 06 / 2013 အဆိုပါတန်း Cross and အဆင့်ကိုဖြတ်ထိန်းချုပ်ထားပြုလုပ်ခြင်းစွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်လိုင်းကို TCDD ဆုတ်ခွာအလုပ်7built လိမ့်မည်။ REGION ပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေးအဆင့်ကူးခြင်းနှင့်7အဆင့်ကိုကူးဓာတ်အားလိုင်းများအပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်5အမှတ်2ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်ကိုထိန်းချုပ်စေ 4734 အပိုင်းပိုင်းxnumx.bölgညွှန်ကြားမှုဇုန်အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 19 / 2013 71429-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Ali ÇETINKAYA mAh ။ STATION ကို CAD ။ NO: CAT 1:6AFYONKARAHİSARဗဟို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2-2722137621 - ...
ရော်ဘာအဆင့်ကိုဖြတ်၏နံပါတ်တိုးပွားလာ coated 14 / 04 / 2017 TCDD Afyonkarahisar 7: ရော်ဘာအဆင့်ကိုဖြတ်၏နံပါတ်တိုးပွားလာ coated ။ 2017 နှစ်ပေါင်း Ihsaniye Ihsaniye-Karacaahmet လမ်းပေါ်သယ်ဆောင်ပထမဦးဆုံးရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ အရေအတွက်ကတစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းတစ်ရက်နှင့်အတူတိုးပွားလာနေသည်တန်းဖြတ်မှာမော်တော်ယာဉ်၏ဘေးကင်းလုံခြုံကျမ်းပိုဒ်အဘို့အဆင့်ကို Cross and အင်္ကျီရော်ဘာမှာ TCDD ရထား။ တူရကီ Afyonkarahisar7သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထား။ ရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းဖို့လမ်းပေါ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုİhsaniye-တန်းဖြတ်ခြင်းဖြင့် Karacaahmet ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လျှင်မြန်စွာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းİhsaniyeပြုအလုပ်ဖုံးအုပ်တူရကီပြည်နယ်မီးရထားဖွငျ့အဆငျ့ဖြတ်တိုးပွားလာ၏ 2017 နှစ်ပေါင်း၏ပထမဦးဆုံးရော်ဘာအပေါ်ယံပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ Gateway မှာကြောင့်မျက်စိအဖြစ်လမ်းမော်တော်ယာဉ်၏ဘေးကင်းလုံခြုံကျမ်းပိုဒ်မှသိပ်သည်းအသွားအလာအတွက်ကားတစ်စီးလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ် ...
ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်၏လေလံပွဲ Incognito ခံရဖို့အလုပျခ 58 အမျိုးအစား 03 / 08 / 2012 ဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာလက်ထောက်တာဝန်ရှိသည်မှကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးကော်မရှင်နူးညံ့1.BÖLG၏ဝယ်ယူရေးရုံးဒေသန္တရရုံးဝယ်ယူ။ NİHATခြင်္သေ့သည်နူးညံ့သောADRESİTCDDစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အဦ / HAYDARPAŞAဖုန်းနှင့် NO0216 337 82 14 / 4478-44980216 336 22 57 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 25 / 07 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 14 / 08 / 2012 တွင် TIME ဖက်စ်: 14: 30 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 100 - လေလံ ON £လေလံ FILE ကို NUMBER ကို SUBJECT ကိုပစ္စည်းများစာချုပ် 2012 / 96244 8.000 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ adresikomisyonsefligi@hotmail.co ငါ 58 ယူနစ် B ကို type ကိုကွန်ကရစ်ပာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း tebdili ဝယ်ယူရန်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတင်ဒါလိမ့်မည်။ Xnumx.bölgအဆိုပါ TCDD ညွှန်ကြားမှု: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: အုပ်ချုပ်ရေး၏ 1 / 2012 96244: ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆင့်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့မဟုတ်မြေပေါ်စီမံကိန်းကိုရဲ့တံခါးပေါက်န်ဆောင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရပါလိမ့်မည် 12 / 03 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာဖြစ်ရလိမ့်မည်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့မဟုတ်ရထားလမ်းဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုစီမံကိန်း၏မြေပေါ်မှပြောင်းလဲရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေသန္တရရုံးထောက်ပံ့ရေးန်ဆောင်မှုစီမံကိန်းသည်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေအမှတ် 8 4734 အပိုဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်ပြောင်းပေး 19 PCs အဆင့်ကိုကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့မဟုတ်မြေပေါ်ရှာဖွေတွေ့ရှိဇုံများကအိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 12144 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgemudurlug .gov.tr ​​ဃ) တင်ဒါ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စစ်တမ်းစီမံကိန်းကိုန်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်အဆင့်ကူးမြေပေါ်ကိုလျှော့ချပြောင်းလဲရမည်) 16 / 06 / 2015 လေ့လာရေးစီမံကိန်းကိုန်ဆောင်မှု STATE ရထားလမ်း Administration7၏ TC TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေသန္တရရုံး7ဒေသဆိုင်ရာရုံးအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အင်ဂျင်နီယာ၏ပြင်ဆင်မှုအရသိရသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအောက်ပိုင်းသို့မဟုတ် 14 အဆင့်ကိုကူးအတွက်မြေပေါ်စီမံကိန်းကိုဝုဏ် converting ပုဒ်မပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 ဝယ်ယူရန်တိုင်ပင်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 73312 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 ဗဟို STATION ကို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621 - 2722141943 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: tcddihalekomisyonuafyon@mynet.co ငါ d) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဆငျ့ Cross and အဆင့်ကိုကူးဂီယာလိုင်းများအောင်ထိန်းချုပ်အလုပ်ပြုမိပါလိမ့်မည်ရေးဆွဲခဲ့သည်
ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်၏လေလံပွဲ Incognito ခံရဖို့အလုပျခ 58 အမျိုးအစား
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စစ်တမ်းစီမံကိန်းကိုန်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မည် (သို့မဟုတ်အဆင့်ကူးမြေပေါ်ကိုလျှော့ချပြောင်းလဲရမည်)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြေပေါ်Yaptırılacaktır (Ulukışlaအဆင့်အဆိုပါမြေပေါ်မှပြောင်းလဲခြင်း Crossing)
တိုးတက်မှုဖော်ဆောင်ရေးတွင်အမှုအရာYeşilkentအဆင့် Crossing မြေပေါ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆငျမခွအလုပ်လုပ်မှအဆင့် Crossing အလိုအလျောက်အတားအဆီးနှင့်ဝင်ငွေခွန်လွယ်ပါတယ် Hale ကYaptırılacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အဟောငျးသို့မဟုတ်ခုံးကျော်တံတားစီမံကိန်းပြင်ဆင်မှုအလုပ်အတွက် Transmutation အဆင့် Crossing (တင်ဒါပယ်ဖျက်ထား)